‘लिली बिली’को दोश्रो दिनको कमाई कति ? – Mero Film
‘लिली बिली’को दोश्रो दिनको कमाई कति ?
२०७५ वैशाख २ गते ८:५२
२०७४ सालको अन्तिम दिन चैत्र ३० गते देखी प्रदर्शनमा आएको फिल्म लिली बिलीले प्रदर्शनको दोश्रो दिन राम्रो ब्यापार गर्न सफल भएको छ । पहिलो दिन कुल ८२ लाखको ब्यापार गरेको फिल्मले हिजो शनिबार देशभर हाउसफुल शोका साथ कुल १ करोड ३६ लाख ८३ हजार ९५६ कलेक्सन गर्न सफल भएको छ ।
उपत्यका भित्र कुल ७१ लाख ८३ हजार ९५६ को ब्यापार गरेको फिल्मले उपत्यका बाहिर ६५ लाख भन्दा बढीको ब्यापार गरेको निर्माता तथा बितरक गोबिन्द शाहीले जानकारी दिएका छन । यसरी हेर्दा लिली बिलीको दुई दिने कलेक्सन २ करोड १८ लाख भन्दा बढी भएको छ । निर्माता/बितरक गोबिन्द शाहीले भने ‘शनिबारको शोमा दर्शकको महासागर देखियो । प्रदिप र जशिताको जोडीलाई दर्शकले खुब रुचाउनु भयो । कतिपय दर्शकले टिकट समेत पाउनु भएन । बर्षको अन्त्य र सुरुवात एक उत्कृष्ट फिल्मबाट भएको प्रतिकृया पाएका छौँ त्यसमा लिली बिली निर्माण टिम निकै खुशी छौँ ।’
मिलन चाम्सले निर्देशन रहेको लिली बिली सुदिप खड्का र गोबिन्द शाहीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन भने फिल्ममा प्रदीप खड्का, जसिता गुरुङ, प्रियंका कार्की, अनुप बिक्रम शाही, सविन श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ ।